Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Manampahaizana mpamarina an-kady
INTY SY NDAY: Manampahaizana mpamarina an-kady
Nisy fanadihadiana iray navoakan’ny haino aman-jery tsy miankina Viva tamin’ny talata teo. Fanazavana avy amin’ny mpikambana iray ao anatin’ny Faribolam-pandinihan’ny mpahay fihariana eto Madagasikara na « Crem » (Cercle de Réflexion des économistes de Madagascar) momba ny Tsena fifanakalozam-bola vahiny na « Marché Interbancaire de Devises » no novelabelariny tao. Izy dia manindry mafy fa tsy tokony foanana io Tsena fanakalozam-bola vahiny io fa fanoitran’ny fampivoarana ny toekarem-pirenena, ary mety hiteraka olana eo amin’ny fifandraisantsika malagasy amin’ny any ivelany ny fanafoanana azy io, hoy izy.
Maro aloha ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena no mitaky ny fanafoanana an’io « Mid » na tsena fanakalozam-bola vahiny io, ary misy amin’izy ireny koa ny mpahay fihariana. Hatramin’ny taona 1994 nampiharin’ny governemanta Ravony ny politikan’ny fitsingevahevan’ny sandam-bola malagasy (politique de flottement) no nisian’io tsena fanakalozana vola vahiny io teto.
Baikon’ny tahirim-bola iraisampirenena (Fmi) no nahatonga izany, ka ny minisitry ny vola tamin’izany, dia Ingahy Raserijaona José sy ny minisitry ny toekarena tamin’izany, dia Rabetsitonta Tovonanahary no nanao sonia ny fifanekena tamin’ny Fmi momba an’io ka navoaka ho didim-panjakana ny fampiharana azy teto.
Izahay manokana aloha dia tsy manambany ny fahaizan’ny mpahay fihariana malagasy mihitsy satria isan’ny voasokajy ho sangany eto amin’ny tany sy ny firenena izy ireny. Ny tsy azo hadinoina kosa anefa dia ny vokatry ny fepetra noraisina na ny fanapahan-kevitra nirosoana toy ny fananganana ny Tsena fifanakalozam-bola vahiny teto hatramin’izay (1994 no mankaty) dia tsy nitondra fihatsaran’ny toekarem-pirenena
Niteraka fihazakazaky ny fitotonganan’ny sandan’ny vola malagasy aloha ny fampiharana an’io Tsena « Mid » io teto. Izay no tsapan’ny maro. Ny antony dia nazava fa nolalaovin’ireo vahiny mpandraharaha ara-barotra teto izy io ka rehefa tian’izy ireo nomena aina kely ny sandan’ny vola malagasy satria hanafatra entana izy dia nanakalo vola vahiny izy. Rehefa tian-dry zalahy natotongana ny sandan’ny vola malagasy satria nanondrana entana izy dia nanakalo vola vahiny koa izy.
Taty aoriana dia nihombo ny fitotonganan’ny sandan’ny vola malagasy, ka ankoatry ny voka-dratsy nateraky ny Tsena « Mid » dia teo koa ny fanontan’ny mpitondra fanjakana nifandimby teto vola tsy misy antoka (planche à billets). Taty amin’ny vanim-potoana nitondran-dRavalomanana dia nitohy izany, indrindra fa tamin’ny fampiharany ny fepetra nampiantonana ny tataon-kaba tamin’ny entana sasany nafarana na ny « détaxation ». Amin’izao fotoana dia tsy miova ny fanaon’ny mpitondra.
Noho izany, isan’ny fototry ny fitotonganan’ny sandan’ny vola malagasy miteraka izao fahantrana lalina mianjady amin’ny vahoaka izao aloha io Tsenam-bola « Mid » io ka rariny ny fitakian’ny sokajin’olona maro ny fanafoanana azy io. Tsy mahay fa fanohizana ny fampidirana kizo ny firenena kosa ny hevitra nambaran’io mpahay fihariana iray ao anatin’ny « Crem » io, ary azo ambara ho faty antoky ny firenena raha toa izany avokoa, sanatriavin’ny vava, ny ataon’ny manam-pahaizana eto. Vahaolana hafa no tokony karohina raha tena te hampiakatra ny tontolon’ny fihariana eto isika fa hatreto aloha dia nampitondra faisana ny vahoaka sy namotika ny toekarem-pirenena io « Mid » io. Farafaharatsiny mba nisy fepetra mirazotra tamin’ny fampiharana azy io mba nimasoana teto fa nandeha ila ilay izy nefa ny toekarem-pirenena mbola narefo, ary dia vao mainka potika.